गत बिहीबार बाँकेको खजुरामा भएको जागरण सभामाथिको आक्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरेको छ । घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको प्रष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको जानकारी दिनेबित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरु उठेका थिए । त्यसपछि सभामुख महराले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई बोल्न समय दिए । खाँणले कांग्रेस बाँके जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको हात भाँच्चिने गरी भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कडा कारवाहीको माग गरे । घटना भत्र्सनायोग्य भन्दै उनले दोषीमाथि कारवाहीको माग गरेका हुन् ।
उनले सो घटनाबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै जवाफ चित्तबुझ्दो नआए संसदको बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए । नेकपाका शिर्ष नेताले अरिँगाल जसरी परिचालित हुन यसअघि आव्हान गरेको भन्दै उनले बाँकेको खजुरामा अरिँगाल परिचालन भएको देखिएको बताए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकर्ताहरु अरिँगालजसरी कार्यक्रमस्थलमा छिरेर आक्रमणमा उत्रिएको भन्दै उनले शान्तिपूर्ण सभाकक्षभित्र नै सत्तारुढ पार्टीका चिनिएका सदस्यहरुले अर्को पार्टीको सभा विथोल्नु असंवैधानिक र निन्दनीय भएको बताए । उनले सो घटनामा स्थानीय प्रशासन पनि मौन देखिएको भन्दै घटना योजनावद्ध ढंगले भएको आरोप लगाए । यस्ता घटनाबाट जागरण अभियानबाट कांग्रेस विचलित नहुने पनि उनले बताए ।
खाँणले बोलेपछि सभामुख महराले गृहमन्त्री थापालाई जवाफ दिन समय दिए । गृहमन्त्री थापाले बाँके घटना राजनीतिक घटना नभएको बताए । घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिएका थिए ।
थापाको जवाफपछि विभिन्न सांसदहरुले पूरक प्रश्न सोधेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन पुनः रोष्ट्रममा उभिएका गृहमन्त्री थापाले घटनालाई राजनीतिक रुपमा नहेर्न आग्रह गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, गृहमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो आसनबाट उठेर बैठक चल्न दिएनन् । अवरोध जारी रहेपछि सभामुख महराले सहमति जुटाउन बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । १० मिनेटका लागि स्थगित बैठक झन्डै डेढ घण्टापछि सुरु भयो, तर अवरोध जारी रह्यो । दोस्रोपटक पनि अवरोध जारी रहेपछि सभामुख महराले सोमबार (आज) दिउँसो तीन बजे बोलाएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा पनि उस्तै
उता, बाँकेमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा भएको आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ । आइतबार ३ बजे शुरु भएको बैठक कांग्रेसले घटनाका दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै अवरुद्ध गरेको हो ।
बैठक शुरु हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरु उठेका थिए । त्यसपछि अध्यक्षले कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए । सो क्रममा सांसद पाण्डेले बाँकेको खजुरामा अरिँगालको आक्रमण देखिएको भन्दै सभापति किरण कोइरालाको हात भाँच्चिने गरी भएको घटनाको भत्र्सना गरे । खजुरामा कार्यक्रम चलिरहँदा ज्यान लिने नियतले सांघातिक हमला गरिएको भन्दै पाण्डेले कांग्रेसले घटनामा संयमता अपनाएकाले ठूलो क्षति हुन नपाएको बताए ।
कांग्रेसको जागरणबाट अत्तालिएर सरकारले आक्रमण गराएको आशंका आफूहरुलाई भएको पाण्डेले बताए । उनले बाँकेको घटना योजनावद्ध रुपमा घटाइएको भन्दै सरकार र गृह मन्त्रालय गम्भीर नभएकाले किटानी जाहेरी समेत दर्ता नगरिएको आरोप लगाए । किटानी जाहेरी दर्ता नगरेसम्म र वास्तविक अपराधीहरुलाई कारवाही नभएसम्म संसद चल्न नसक्ने चेतावनी पाण्डेले दिएका थिए । कांग्रेसले जागरण अभियानका क्रममा सरकारका गलत काम र निर्णयको भण्डाफोर गरिरहेको र त्यसबाट अत्तालिएर आक्रमण गराइएको उनको भनाइ छ । सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले अहिलेसम्म पनि जाहेरी दर्ता गरेको छैन, तपाईं कसरी कारवाही गर्नुहुन्छ ? भन्दै गृहमन्त्री थापालाई प्रश्न गरे । अनिता देवकोटाले नेकपाको सरकार भएकाले कानुन लाग्ने हो वा होइन ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले पीडितको तर्फबाट दिइएको जाहेरी अस्वीकार गर्नु लोकतन्त्र विरोधी भएको टिप्पणी गरे । अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक पनि सोमबार (आज) बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
‘बाँके घटना राजनीतिक होइन’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बाँके घटना राजनीतिक नभएको प्रष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बाँके घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरिसकेको बताए ।
बाँकेको खजुरामा वीपी कोइरालाको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विषयमा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नआएको तर घटनालगत्तै प्रहरी परिचालित भएर अभियुक्त पक्राउ गरेको उनले जानकारी दिए ।
खजुराका हेमन्त थापा, लोकबहादुर शाहीलगायतको समूहले होहल्ला गरेको र हुलहुज्जतका क्रममा बाँके कांग्रेस सभापति किरण कोइरालाको हातमा चोट लागेको बताउँदै खजुरामा निर्मल खत्री, रोशन सिंह ठकुरी, लोकबहादुर शाहीलाई २८ गते पक्राउ गरिएको जानकारी उनले दिए । त्यस्तै अन्य संलग्नहरूको पनि खोजी भइरहेको उनले बताए ।